Sandefjord (town) - Wikipedia
Ku saabsan codkan Sandefjord (caawin · info) waa magaalo iyo degmada ugu badan degmada Vestfold County, Norway. Xarunta maamulka degmada waa magaalada Sandefjord. Degmada Sandefjord waxaa la aasaasay bishii Janaayo 1, 1838. Degmada Sandar ayaa la isugu daray Sandefjord 1dii Janaayo, 1968. Bisha Janaayo 1, 2017, degmooyinka baadiyaha Andebu iyo Stokke waxay ku biireen Sandefjord iyada oo qayb ka ah dib-u-habeyn degmo oo heer qaran ah. 
Magaalada ayaa waxaa loo yaqaan taariikhda taariiqda tiknoolajiyada ah ee Viking iyo warshadaynta barwaaqada, taasoo samaysay Sandefjord magaalo ugu taajirsan Noorway  Maanta waxa ay dhistay shirkaddii saddexaad ee ugu ballaadhnaa ee Norwey.   Waxay u tahay hudheelka kaliya ee yurub ee loo qoondeeyay in la xoqdo, waxana uu ku yaallaa Gokstad Mound halkaas oo qarnigii 9aad ee Gokstad Ship laga helay.
Sandefjord waxay leedahay naannooyin badan, oo ay ku jiraan Viking-ama Caansan "Capital" Norway.  Waxaa sidoo kale lagu magacaabo "Bathing City" (Badebyen) sababtoo ah xeebaha badaha iyo munaasabadaha hore ee munaasabadaha.  Waxaa weli loo tixgeliyaa magaalo damaashaad ah sababtoo ah tirada badan ee soo booqda bilaha xagaaga. 
Sandefjord wuxuu noqday xarun isgaadhsiin ah, gurigiis oo ah Garoonka Caalamiga ah ee Torp, mid ka mid ah garoomada ugu weyn ee Norway. Xidhiidhada maalinlaha ah ee Iswiidhan waxaa bixiya Fjord Line iyo Line Color iyadoo laga soo galo dekedda magaalada. Wadada Yurub ee E18, mid ka mid ah waddooyinka ugu muhiimsan ee Norwey, ayaa ka soo jeeda degmada.
Sandefjord waa meel awood u leh xisbiga Konserfatifka;   Xisbiga konserfatifka ayaa helay boqolkiiba 70% codadka la dhiibay 2011. Badhasaabka hadda waa Bjørn Ole Gleditsch oo ka tirsan xisbiga Konserfatifka, kaas oo badhasaab ka ahaa tan iyo 2004.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Sandefjord_(town)&oldid=183240"
Last edited on 19 Oktoobar 2018, at 15:07